ဧည့်လမ်းညွှန် တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုလျှင်…. | Ministry of Hotels and Tourism, Myanmar
ကျွန်တော် ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ဦးဖြစ်ရန် ကြိုးစားခဲ့ဖူးပါသည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီး နောက် ဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်း ၀င်ခွင့်ကို ၀င်ရောက်ဖြေဆိုရန်ရည်ရွယ်ပြီးရန်ကုန်မြို့၊ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းရှိ ဆရာကြီးသင်္ချာဦးအောင်သောင်းထံ တွင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင် တန်းတက်ဖြစ် သည်။ အားလပ်ချိန်တွေမှာ ရွှေတိဂုံဘုရားရင်ပြင်ပေါ်သို့တက်ပြီး နိုင်ငံခြားခရီးသွားများနှင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောအလေ့အကျင့်ရရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဧည့်သည် အချို့က လက်ခံစကားပြောသော်လည်းအချို့ကမယုံသလိုအမူအရာနှင့် ရှောင်တိမ်းသွားတာကိုလည်း ကြုံခဲ့ရဖူးပါသည်။ လူငယ်တစ်ယောက်အနေဖြင့် အင်္ဂလိပ် စကားပြောလိုခြင်း၊ သင့်တင့်သောဝင်ငွေရရှိခြင်း၊ လွတ်လပ်မှုရှိခြင်း၊ ခရီးသွားရခြင်း စသည့်အချက်များကိုနှစ်သက်၍ ဧည့်လမ်းညွှန်ဖြစ် လိုခဲ့ခြင်းဖြစ် မည်ဟုထင်မိပါသည်။ အဲဒီအချိန်က စာရေးဆရာမဂျူး၏ “မြစ်တို့၏မာယာ” ၀တ္ထု နှင့် ရုပ်ရှင် အောင်မြင်နေချိန်ဖြစ်လို့ ယင်းဇာတ်ကားတွင် ဧည့်လမ်းညွှန်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်သည့်မင်းသားရဲအောင်၏ထက်မြက်သောဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို အားကျခဲ့မိလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သို့သော်ဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်းဝင်ခွင့်ကိုကျွန်တော် မဖြေဖြစ်ခဲ့ပါ။ယင်းနောက် မမျှော်လင့်ပဲ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀န်ကြီးဌာနတွင် ဦးစီးအရာရှိအဖြစ် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ဌာနရဲ့သဘောသဘာဝအရ ဘာသာစကားတတ်မြောက်မှုဟာ အလွန်အရေးကြီးလို့ အင်္ဂလိပ်စာကို (၃) နှစ်တိတိ ပြန်လည်ကြိုးစားလေ့လာသင်ယူပြီးနောက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘာသာရပ်ဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Tsukuba University ကပေး သည့် မဟာဘွဲ့ပညာသင်ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဂျာမနီနိုင်ငံ၌ (၉) လတာလေ့လာ သင်ယူ ခွင့်ရခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ မှစတင်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာရှိသည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်း၊ တာဝန်ခံအဖြစ် တာဝန်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထို့အတွက် မိမိစိတ်ဝင်စားခဲ့သည့် ဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စွာပြန်လည်ထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ထားပါတော့။ ဤဆောင်းပါးတွင် အဓိက တင်ပြလို သည်က ကျွန်တော့်အကြောင်းမဟုတ်။ ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက်ဖြစ်လိုသူအတွက် လိုအပ်သည်များ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် သင်တန်းကျောင်း facebook (https:// m.facebook. com/directorateofhotelsandtourism/)၏message box မှတစ်ဆင့် မေးမြန်းချက်များနှင့် အခြားသိသင့်သည်များကို ဗဟုသုတ အဖြစ်ဖြန့်ဝေပေးလိုရင်း ဖြစ်သည်။ နောင်တွင်လိုင်စင်ရဧည့်လမ်းညွှန် (National Guide) ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုလိုသူများအတွက် ယခုဆောင်ပါးမှ တစ်ဆင့် တစ်စုံတစ်ရာအထောက်အကူရလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။
ပထမ လိုအပ်ချက်ကတော့လက်ရှိ သတ်မှတ်ထားချက်တွေနှင့်ကိုက်ညီပြည့်စုံနေဖို့ဖြစ်ပါသည်။ အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီး သူဖြစ်ရပါမည်။ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက်အနေဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်လို့ ကျန်းမာရေး၊ ရပ်ကွက်နှင့် ရဲစခန်းထောက်ခံချက်များလိုအပ်ပါသည်။ ၀င်ခွင့်ဖြေဆိုရန်လျှောက်လွှာတင်ရာမှာ ပူးတွဲတင်ပြထားသည့် အထောက်အထားတွေအားလုံးစစ်မှန်မှုအတွက်ကို မူရင်းနှင့်တိုင်ဆိုင်စစ်ဆေးပါသည်။ ဖြေဆိုမည့်သူသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်အခြားဘာသာစကားတစ်ခုခုကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ကြိုတင်တတ်မြောက် ထားပြီးဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးက ၀ါသနာနှင့်စိတ်ဓာတ်ပါ။ ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက်ဖြစ်လာလျှင် နိုင်ငံကိုယ်စားပြုပြီး အိမ်ရှင်တစ်ယောက်အနေဖြင့်ရှင်းပြရတာဖြစ်လို့ မျိုးချစ်စိတ်ရှိဖို့၊ အပြုသဘောတွေးတတ် မြင်တတ် ရှင်းပြတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါသည်။ သင်တန်းကာလသည် တိုတောင်းသော်လည်း အချိန်လုကာကြိုးစား၊ ကျက်မှတ်၊ လေ့လာ သင်ယူရပါသည်။ ခရီးသွားနယ်ပယ်မှာ ဧည့်လမ်းညွှန်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေဖို့လည်း သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာစကားအလိုက် ဗဟုသုတတွေကို အဆက်မပြတ် ရှာဖွေ၊သိမ်းဆည်း၊ သိုမှီးနေရပြန်ပါသည်။ဧည့်သည်မှမြင်သမျှ ကြားဖူးသမျှ သိလိုရာကိုမေးမြန်းတတ်သည်ဖြစ်ရာ အဖက်ဖက်ကဗဟုသုတနှံ့စပ်နေရန် ပြင်ဆင်ထားရပါသေးသည်။ ဧည့်သည်နှင့်အတူ နိုင်ငံအနှံ့ခရီးသွားရသည့်အလုပ်ဖြစ်လို့လည်း ကျန်းမာသန်စွမ်းမှု၊ ဧည့်သည် အတွက်ကျန်းမာရေး၊ ဘေးအန္တရယ်နှင့် အခြားဘက်ပေါင်းစုံက ထောင့်စေ့အောင် တွေးခေါ်ဆင်ခြင်နိုင်မှု၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု၊ စိတ်ရှည်သည်းခံမှု၊ အပင်ပန်းခံနိုင်မှု၊ ၀န်ဆောင်မှုပေးလိုစိတ်စသည့်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများအတွက် မိမိကိုယ်ကို သုံးသပ်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါသည်။
တတိယ အရေးအကြီးသည်က ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနှံ့စပ်မှုပင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏ္ဍန်း အချက်အ လက်နှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင် အသင်း(၁၁)သင်းအကြောင်း၊အထင်ကရ ခရီးစဉ်ဒေသများ၊ ဒေသန္တရနှင့် မြန်မာ့သမိုင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတ၊ သမိုင်းဝင်နေ့စွဲများနှင့် နှစ်အလိုက် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနေ့ဆောင်ပုဒ် စတာတွေကို ကြိုတင်လေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ၀န်ကြီးဌာန၏web page (tourism.gov.mm) နှင့် facebook page (https://m.facebook.com/moht.mm/) ပါသတင်းများကို ရသလောက်လေ့လာ ဖတ်ရှုသင့်ပါသည်။ အလားတူ ဖြေဆိုမည့်ရက်မတိုင်မီ (၂) လခန့်အတွင်း နိုင်ငံတော်ပိုင် မြန်မာ့အလင်း၊ ကြေးမှုံသတင်းစာများမှ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်း၊ ဆောင်းပါး အချက်အလက်များကို ထုတ်နှုတ်လေ့လာထားသင့်ပါသည်။၀င်ခွင့်စာမေးပွဲ မေးခွန်းပုံစံကိုနားလည်ပြီး လေ့လာပြင်ဆင် ထားနိုင်လျှင်တော့အကောင်းဆုံးပါ။
၀င်ခွင့်စာမေးပွဲကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသုံးဧည့်လမ်းညွှန်များအတွက် နှင့်အခြားဘာသာ(ထိုင်း၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှ၊ အီတလီ၊ ဂျာမန်၊ တရုတ် ဘာသာများ) သုံးဧည့်လမ်းညွှန်များအတွက်ဟူ၍ူ (၂) ပိုင်းခွဲပြီး စစ်ဆေးပါသည်။ မိမိဖြေဆိုလိုသည့် ဘာသာစကားအရ အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ထားရ မှာဖြစ်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာသုံးဧည့်လမ်းညွှန်ဝင်ခွင့်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာ(၆၀) မှတ်နှင့် မြန်မာစာ(၄၀) မှတ် စုစုပေါင်း (၁၀၀)မှတ်ဖိုးကို (၃)နာရီရေးဖြေမေး ခွန်းဖြင့်မေးပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာရေးဖြေ (၆၀) မှတ်တွင် Grammar (၂၀)မှတ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဗဟုသုတ(၄၀) မှတ်တို့ပါဝင်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာမေး ခွန်းတွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ခရီးစဉ်ဒေသတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်essay (သို့မဟုတ်) letter writing ကိုလည်းမေးတတ်ပါသည်။ မြန်မာစာရေးဖြေ(၄၀) မှတ်တွင် မူအထက်ကတင်ပြခဲ့သည့်တတိယအချက်ပါဗဟုသုတအချက်အလက်များမည်မျှနှံ့စပ်သည်ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်မေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
အခြားဘာသာသုံးဧည့်လမ်းညွှန်များမှာ အင်္ဂလိပ်စာရေးဖြေအတွက် Grammar (၂၀)မှတ်နှင့် မြန်မာစာ ဗဟုသုတရေးဖြေအတွက် (၄၀)မှတ်စုစုပေါင်း (၆၀)မှတ်ဖြင့် (၂)နာရီမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရပါသည်။ မေးခွန်းများသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာသုံးဧည့်လမ်းညွှန်ဝင်ခွင့်နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ထူးခြားသည်ကကျန်ရှိသည့်အမှတ်(၄၀)အတွက် နှုတ်ဖြေဖြေဆိုရခြင်းပင်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသုံးဧည့်လမ်းညွှန်ဝင်ခွင့် တွင်ဖြေဆိုသူများပြား လွန်း၍လက်ရှိ တွင်နှုတ်ဖြေစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ အခြားဘာသာသုံးဧည့်လမ်းညွှန်များအတွက် နှုတ်ဖြေ (၄၀)မှတ်ဖိုး တွင်ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် (YUFL) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်း (MTGA) တို့မှ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာစကားအလိုက် အမှတ်(၂၀) ဖိုးစီကို စုစုပေါင်း (၁၅) မိနစ်ခန့် မေးပါသည်။ ယခု ဖေါ်ပြထားသည့် အချက်အလက်များကို သင်တန်းကျောင်း၏ facebook စာမျက်နှာတွင်လည်းအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
သင်တန်းသားရွေးချယ်မှုနှင့် သင်တန်းမှာ ဘာတွေကို ဘယ်လိုသင်လဲ။
ဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို တစ်နှစ်လျှင် (၂) ကြိမ်ကျင်းပလေ့ရှိပြီး (၁) ကြိမ်လျှင် ဖြေဆိုသူ (၁၀၀၀) ၀န်းကျင်ခန့်ရှိတတ်သည်။ယင်းအနက်မှ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁)ခုလျှင်သင်တန်းသား(၁၀၀) ၀န်းကျင်ခန့်ဖြင့်သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂)ခုအတွက် စုစုပေါင်းသင်တန်းသား (၂၀၀)ခန့်ကို တစ်ပြိုင်တည်းရွေး ချယ်လေ့ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဖြေဆိုသူ (၁၀၀၀) ခန့် အနက်မှ အရည်အချင်းပြည့်မီသူ (၂၀၀)ခန့်သာ အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ရာတွင်အမှတ် အများဆုံးရရှိမှု၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်လည်ပတ်သည့် ဧည့်သည်နှင့်ဘာသာစကားအလိုက် လိုင်စင်ရဧည့်လမ်းညွှန်အရေအတွက်အချိုး (တနည်းအားဖြင့်) demand နှင့် supply မျှတစေရန် ချိန်ဆရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်းသားများတွင် ဆရာဝန်၊အင်ဂျင်နီယာ၊ ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်ဆင်း၊ သင်္ဘောသား၊ ရှေ့နေ၊ သူနာပြု အစရှိသည့် မူလ profession တစ်ခုရှိပြီးသားသူများပါဝင်သလို အငယ်ဆုံးအနေဖြင့် အသက်ပြည့်မီသည့် ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသားများအထိ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။
သင်တန်းသား/သူများသည်သင်တန်းကာလက(၁၀) ပတ်အတွင်း ဘာသာရပ်များကို (intensive course) ဆန်ဆန် မနက် (၉) နာရီမှ ညနေ (၄) နာရီအထိ (၁) ပတ် (၅) ရက်လေ့လာသင်ယူရသည်။ သင်ကြားသည့် ဘာသာရပ်များကိုအဓိကအားဖြင့် အပိုင်း (၄)ပိုင်းခွဲနိုင်ပါသည်။ (၁) ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက် မဖြစ်မနေတတ်မြောက်ထားရမည့် အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုများ (၂) ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပို့ချသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ဥပဒေများ(၃) ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် ၀န်ကြီးဌာနများဖြစ်သည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ သစ်တော၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ပညာရေး စသည်တို့မှ ဘာသာရပ်များ နှင့် (၄) အခြား လိုအပ်သောဗဟုသုတများဖြစ်သည့် ပြည်သူ့နီတိ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပထ၀ီဝင်၊ ရှေးဦးသူနာပြု၊ ခြေလျှင်တောင်တက်၊ ငှက်ကြည့်၊ သစ်ခွနှင့်ရုက္ခဗေဒ၊ မြန်မာ့ဗိသုကာ၊ ရုပ်သေးပညာ၊ မြန်မာ့သဘင်၊ ဂီတ၊ ပန်းချီ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ရိုးရာ၊ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက်များစသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ သင်တန်းနည်းပြများသည်ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိကြီးများ၊ ၀ါရင့်ဧည့်လမ်းညွှန်ကြီးများနှင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင် ပညာရှင်ကြီးများ ဖြစ်ပါ သည်။
သင်တန်းကာလအတွင်း မြန်မာအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံကို မြတ်နိုးစွာဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ အချိန်တိကျမှု တို့ကိုလည်းလေ့ကျင့်ပေးသည်။သင်တန်းတွင် အမျိုးသားများက ကော်လာကတုံးအင်္ကျီနှင့်ပုဆိုး၊ အမျိုးသမီးများက ရင်ဖုံး၊ ရင်စေ့၊ ခါးတို၊ လက်ရှည်နှင့် ထမိန်ကို နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်ရသည်။သင်တန်းဝတ်စုံ နှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်တာဝန်ယူစကာလက ကျောင်း logo ပါသည့် အဆင်တူ sport shirtများဝတ်ဆင်လျှက် လက်တွေ့ လေ့လာရေး ခရီးစဉ်တွင် လည်ပတ်စေရန်ကျောင်းမှ ဧည့်လမ်းညွှန် ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ဖူးပါ သည်။ဆရာ၊ ဆရာမများက လက်ရှိမြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတွင် မြန်မာဝတ်စုံသည် ရှေ့ဆုံးကပါဝင်သဖြင့်သင်တန်းသားများတန်ဖိုးထားဝတ်ဆင်တတ်စေရန် မြန်မာဝတ်စုံဖြင့်သာ လည်ပတ်စေသင့်ကြောင်း ရှင်းပြကြလို့ ကျွန်တော့်အစီအစဉ်ကို လက်လျှော့ခဲ့ရပါသည်။ ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက်အနေဖြင့် လိုအပ်ချက်ရှိသည့် ခရီးစဉ်ဒေသတစ်ချို့ (ဥပမာ – တောင်တက်၊ စက်ဘီးစီး၊ ဖေါင်စီး စသည်)မှအပ ဧည့်သည်နှင့်အတူရှိနေစဉ်တွင် မြန်မာဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးကို မြှင့်တင်နေဖို့လိုအပ်သည် မဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ။သို့မှလည်း မြန်မာ့ဧည့်လမ်းညွှန်များအစဉ်အဆက် လက်ဆင့်ကမ်းထိန်းသိမ်းခဲ့သည့် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာ (national identity)များကိုအစဉ်အလာကောင်းတစ်ရပ်အဖြစ်နောင်မျိုးဆက်သစ်များလက်ထက်တွင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။အချိန်တိကျမှုအလေ့အကျင့်ရစေရန်မူသင်တန်းကိုအချိန်မီမရောက်ရှိပါကအမှတ်ဖြတ်ခြင်း၊သင်တန်းတက်ရောက်မှု၈၀% ပြည့်မီခြင်းမရှိသူကိုသင်တန်းမှရပ်စဲခြင်း စသည့်စည်းကမ်းများကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်ထားသည်။
ဗဟုသုတများမှတ်သားနိုင်မှုအတွက် ရေးဖြေ tutorial စာမေးပွဲ (၂)ကြိမ်၊ final exam (၁) ကြိမ် ဖြေဆိုရခြင်းနှင့် စာတမ်းငယ်(၁)စောင်နှင့် အတူ presentation ပြုလုပ်တင်ပြခြင်း (၁) ကြိမ် တို့ဖြင့်လေ့ကျင့်ပေး သည်။ လက်တွေ့လေ့လာမှုအဖြစ် ရန်ကုန်မြို့တွင်း city tour (၁) ကြိမ်နှင့် ပဲခူးမြို့သို့ excursion (၁) ကြိမ် လေ့လာလည်ပတ်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးသည်။ယာဉ်ပေါ်သို့ဧည့်သည်နှင့်အတူ စတင်ရောက်ရှိသည့်အချိန်မှစ၍ ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက်ကရှင်းလင်းတင်ပြမှု (guiding techniques) များကို လေ့လာရေးခရီးစဉ်များတွင် ဆရာ/ဆရာမများက လက်တွေ့လေ့ကျင့်သင်ကြားသဖြင့် အတွေ့အကြုံများရရှိစေသည်။ သင်တန်းသားများအစီအစဉ်ဖြင့် လည်း မိုးယွင်းကြီးသဘာဝဘေးမဲ့အင်း၊ ပြည်မြို့ဝန်းကျင်ရှိ ပျူရှေးဟောင်းမြို့များစသည့်ဒေသများကို ဆရာများနှင့်အတူ စုပေါင်းလေ့လာရေးခရီးသွားကြတာတွေလည်းရှိသည်။ စာမေးပွဲများနှင့် presentation တွင် သတ်မှတ် အမှတ်ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မီသူများကိုသာ သင်တန်းပြီး ဆုံးကြောင်း certificate ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်၍သင်တန်းသားများ အနေဖြင့် ကျားကုတ်ကျားခဲ ကြိုးစားကြရသည်။ ကြိုးစားမှုအားနည်း၍သင်တန်းကို အောင်မြင် စွာ မပြီးဆုံးသူများလည်းရှိတတ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ကြားမှုနှင့်စစ်ဆေးမှုတို့ကို အာဆီယံစံနှုန်းများနှင့်အညီဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေပြီလည်းဖြစ်သည်။
ဧည့်လမ်းညွှန် လိုင်စင်အတွက် နှုတ်ဖြေစစ်ဆေးခြင်း။
ဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်းအောင်မြင်စွာ ပြီးစီးရုံမျှနှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ခွင့်မရှိသေးပါ။ ဧည့်လမ်းညွှန်လိုင်စင်လျှောက်ထားနိုင်ဖို့အတွက် နှုတ်ဖြေစစ်ဆေး မှုခံယူရပါသေးသည်။ ၄င်းကို license test ဟုလည်းခေါ်ကြသည်။ နှုတ်ဖြေစစ်ဆေးမှုဘုတ်အဖွဲ့တွင်အဖွဲ့ဝင်(၅)ဦးပါဝင်သည်။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လာရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ (၁)လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ပညာပေးရေးဌာန (၂)ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကြီးကြပ်မှုဌာန (၃)သင်တန်းကျောင်း ကျောင်းအုပ်/ ဒုကျောင်းအုပ် (၄)ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် (၅)မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း စသည့်ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည့် အဖွဲ့ဝင်များက (၁၅) မိနစ်ခန့် မေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်။
မေးမြန်းရာတွင် ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု၊ သင်ကြားထားပြီးဖြစ်သည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဗဟုသုတ၊ ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ဦး၏ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ အခက် အခဲဖြေရှင်းနိုင်မှု၊ ဧည့်လမ်းညွှန်လိုင်စင်ဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတို့ပါဝင်သည်။ မေးမြန်းသူတစ်ဦးချင်းစီက ဖြေဆိုသူ၏ အဖြေအပေါ်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန် ဖြစ်သင့်သည်ဟု သုံးသပ်လျှင် (A)၊ မဖြစ်သင့်သေးဟုသုံးသပ်လျှင် (B) ဟု မှတ်ချက်ပေးကာအနည်းဆုံး(၃) ဦးက (A) ပေးမှသာလျှင် အောင်မြင်ပြီး (B) (၃) ခုရလျှင်ကျရှူံးပါသည်။ အောင်မြင်သူများသည် လိုင်စင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ကျရှူံးသူများကမူ အနီးဆုံး license test တွင် ၀င်ရောက်ကာ နှုတ်ဖြေ စစ်ဆေးမှု ထပ်မံခံယူနိုင်ပါသည်။
လိုင်စင်ရဧည့်လမ်းညွှန် (National Guide) ဖြစ်လာရန် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ဒေသဆိုင်ရာ ဧည့်လမ်းညွှန် (Regional Guide) အဖြစ် (၃)နှစ်ဆောင်ရွက်ပြီးသူများကို နှုတ်ဖြေစစ်ဆေးမှု (သို့) license test ဖြေဆိုစေပြီး အောင်မြင်သူများကို လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းနှုတ်ဖြေစစ်ဆေးမှုဘုတ်အဖွဲ့တွင်မူ အဖွဲ့ဝင် (၅)ဦးအနေဖြင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ (၁)လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ပညာပေးရေးဌာန (သို့မဟုတ်) သင်တန်းကျောင်းမှကျောင်းအုပ်/ ဒုကျောင်းအုပ် (၂)ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကြီးကြပ်မှုဌာန (၃)ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် (၄)မြန်မာနိုင်ငံခရီး သွား လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း နှင့် (၅)မြန်မာနိုင်ငံဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်း မှ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်ပြီး စုစုပေါင်း(၁၅) မိနစ်ခန့် မေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်။ အောင်/ ရှူံး အတွက် အမှတ်ပေးမှု သတ်မှတ်ချက်မှာ အထက်တွင်တင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဒေသဆိုင်ရာ ဧည့်လမ်းညွှန် (Regional Guide) သင် တန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဒေသ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုအလားအလာနှင့်အတူ ဒေသ၏တောင်းဆိုချက်အပေါ်မူတည်ပြီး အထက်တွင်ဖေါ်ပြခဲ့သည့် အရည် အချင်းပြည့်မှီသူများအတွက် ၀န်ကြီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာ ဖွင့်လှစ်ပေးလျှက်ရှိသည်။
စင်စစ် ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့မှာ လွယ်ကူသည့်အရာမဟုတ်ပေ။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က တွေးထင်ခဲ့သည်ထက်လည်း ပိုမိုနက်ရှိုင်းပေ သည်။ ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း အဆင့်ဆင့်သော လေ့လာမှတ်သားမှု၊ စစ်ဆေးမှုများစွာကို ခံယူလုပ်ဆောင်ရသည်။ အောင်မြင်ချောမောစွာ လိုင်စင်ရပြီးနောက် များမကြာမီပင် နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်များနှင့်အတူ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေသူများကို ပီတိဖြစ်စွာတွေ့ရသလို အချို့လည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ထဲသို့ မရောက်လာသည်များကို တွေ့ရသည်။ ထို့အတွက် ကျွန်တော့် အား ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်လိုကြောင်းမေးမြန်းလာသူများကို ‘ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်တာများ လွယ်တာမှတ်လို့’ အစချီကာ အမြဲတမ်းအသေးစိတ်ရှင်းပြဖြစ်သည်။ ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ဦးဖြစ်လာပြီးနောက် တစ်ကယ့် လက်တွေ့ နယ်ပယ်တွင် လုပ်ဆောင်ရမှုများကအထက်တွင် ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သည်ထက်ပင် ပို၍နက်နဲနေမှာ အသေအချာပင်ဖြစ်သည်။ ဧည့်လမ်းညွှန် စာရေးဆရာ၊ စာရေးဆရာမများ၏စာအုပ်၊ စာပေများတွင် ၄င်းတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံများကို ဖတ်ရှုလေ့လာဗဟုသုတ ရယူနိုင်ပါသည်။ ၀ါသနာနှင့်အတူကြိုးစားခဲ့ကြသည့် ဧည့် လမ်းညွှန်များသည် ယနေ့အချိန်တွင် အောင်မြင်သော ခရီးသွားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအဖြစ် တက်လှမ်းနေသည်ကိုလည်း အတုယူအားကျဖွယ်တွေ့မြင်နိုင်ပေသည်။
ယနေ့အချိန်အခါကဲ့သို့ လိုအပ်သမျှအချက်အလက်များကို အလွယ်တကူရယူနိုင်သည့် နည်းပညာခေတ်ကြီးမှာ ဧည့်လမ်းညွှန်များ လိုအပ်ပါအုံးမလားဟု မေးမြန်းသူများကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ တစ်ကယ်တော့ နည်းပညာရပ်များသည် ဧည့်လမ်းညွှန်ကောင်းတစ်ဦးကဲ့သို့ ဖေါ်ရွေပျူငှာမှု၊ နွေးထွေးမှု၊ ဂရုတ စိုက်စောင့်ရှေက်မှု၊ ဧည့်သည်၏ရင်ဘတ်ထဲသို့ရောက်သည်အထိရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်မှုစသည်တို့ကိုပေးစွမ်းနိုင်စွမ်းရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အတွက် ခရီးသွား လုပ်ငန်းတည်ရှိနေသရွေ့ဧည့်လမ်းညွှန်များလည်း ထာဝရရှင်သန်တည်ရှိနေအုံးမှာဖြစ်သလို ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အလားအလာကောင်း များပိုင်ဆိုင်ထားသည့်မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်းဧည့်လမ်းညွှန်ကောင်းများစွာလိုအပ်နေအုံးမှာဖြစ်ပါသည်။ ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက်သည် ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်ဘာသာ၊ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ့်ရေမြေသဘာဝ၊ကိုယ့်တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုမောင်နှမ အစရှိသောအကြောင်းအရပ်များကို ရှင်းလင်းပြောပြရတာဖြစ် လို့ ဂုဏ်ယူစရာလည်းကောင်း၊ကုသိုလ်လည်းရ၊ ၀မ်းလည်းဝသည့်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း ဂုဏ်ပြုရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါသည်။